Iva Vanhu - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Mharidzo kubva kuna CEO
Kuvimbika, kugadzirwa uye hunyanzvi zvinhu zvakakosha zvepasi rose bhizinesi nharaunda nhasi.Chinangwa chekambani yedu ndechekutarisa kuzadzisa izvi zvinodiwa.
XY Tower Co., Ltd. yakawanikwa muna 2008 apo yaive kambani yekutanga.Pasi pehutungamiriri hwehutungamiriri nekuedza kwevashandi vese, XY Tower ikozvino yakagadzira nyanzvi yekugadzira shongwe uye imwe yemakambani makuru eindastiri iyi kumadokero kweChina.
XY Tower inopa "one-stop shop" yekutengesa bhizinesi remidziyo yemagetsi, dhizaini yeshongwe uye shongwe yekugadzira.
nerutsigiro rwe manejimendi ane ruzivo uye nyanzvi mainjiniya, XY Tower ndeyekupa zvigadzirwa zvemakwikwi uye sevhisi kune vatengi vedu.XY Tower ine zvese zvinhu;tekinoroji, manejimendi masisitimu, vanhu uye simba remari kuti vave anotungamira sevhisi mupi muChina nekune dzimwe nyika.
Tine nyanzvi uye yakavimbika timu.Isu tine ruzivo rwakanyanya kuziva nzira yekuzadzisa zvinodiwa nevatengi.Uye isu tine chivimbo chekugadzira mhinduro yakanaka uye tive nechokwadi chekuti mhinduro dzedu dziri kushanda zvizere, dzinoshanda uye dzinoramba dzichichinjika nguva dzese.
Mamaneja edu ane avhareji yemakore makumi matatu ekushanda ruzivo muindastiri iyi uye anofara nezvemikana yebhizinesi iripo mumusika.
Ndiri kufara kuona iwo ari kukura manejimendi masisitimu, vane hushamwari vane shungu yevashandi uye timu yehunyanzvi kusangana nezvino uye zvemangwana zvebhizinesi zvinodiwa.Iko zvino kune Vatengi vedu vakakosheswa kuti vasarudze, kusvika papi XY Tower yabudirira kusangana kana kudarika zvavaitarisira uye kutipa mubayiro nemhinduro yakatendeseka yekuvashandira zvirinani.
Ini nokudaro ndinovimba nemoyo wese kuti nevatengi vedu vatsva uye venguva dzose, ngatigadzire ramangwana riri nani pamwechete!
Chunjian Shu (Sachigaro webhodhi)
VaShu ndiinjiniya mukuru wemagetsi ane ruzivo rwemakore makumi mana muindasitiri yemagetsi.Aive neruzivo rwemakore makumi maviri ekushanda mubazi rezviwanikwa zvemvura nemagetsi ehurumende yedunhu reSichuan uye akabva atanga uye akange atungamira bhizinesi rakabudirira zvikuru muindasitiri yemagetsi neyekufambiswa kwemashoko.
VaShu vane basa rakabudirira zvikuru mubazi rehurumende uye kutarisira kubudirira kwebhizimisi.Akaratidza hutungamiriri hwake uye ane pfungwa itsva mukati make.
Mr. Shu vave vakabatsira mukukudziridza kukurudzirwa kwakanyanya uye unyanzvi
chikwata chenyanzvi.Ndiye mutungamiriri webhizinesi anoshanda uye akaita akawanda mazano matsva mukuvaka maseti emagetsi.VaShu vane tariro chaiyo uye vanotenda mukushanda nesimba.Anozvipira kugadzira kukosha kune anogovana uye nzanga.
VaLee, vakapedza Chikoro cheMetal surface treatment kubva kuHebei University of Science & Technology.
VaLee vakatanga basa ravo muBureau of Geological Prospecting kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweChina muma1980s.Ipapo akange ashanda kune imwe kambani yehurumende inogadzira shongwe yaive nevashandi mazana manomwe kwemakore makumi maviri.
VaLee vane ruzivo rwakanyanya mukushanda nemasangano akasiyana anosanganisira bazi rehurumende, vehurumende nemakambani akazvimirira.Ane rekodhi rekodhi yekubudirira kubata hombe yekugadzira femu.
Semutungamiri, kugona kwake kuronga timu yakanyatso svusvura inoenderana nechiono chake yakaita kuti kambani iyi iwane chinzvimbo chinoyemurika munyika.
VaLee inyanzvi muindastiri inopisa-dip galvanized ine mukurumbira kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweChina.Ane hunyanzvi pakubata neshongwe yepamusoro kurapwa yakakosha munzvimbo yakakwira corrosion.
Willard Yue Shu (Director webhizimusi remhiri kwemakungwa)
VaShu vakawana dhigirii ravo remaster in management nemari yepasi rose kubva kuUniversity of Glasgow, Britain.Ane makore gumi ekufambira mberi kwechiitiko chekushanda mu venture Capital Institution.Ndiye ari kutonga nyaya dzekambani yeFinance, Human Resource uye Bhizinesi rekunze.Anoda zvikuru mukufambira mberi kwekambani uye nehunyanzvi hwekuvandudza.
Anonzwisisa zvakanaka nemaitiro emazuva ano ekutonga bhizinesi uye ane maoko akapfuma pane ruzivo muzvidzidzo zvekufungidzira mutengo, kuronga kweprojekiti, uye hi-tech yekutanga mari.Ane kugona kwakatanhamara kutungamira timu uye kuendesa sevhisi inodarika zvinotarisirwa nemutengi.
Akatungamirawo basa rekutanga bhizinesi rekunze kwekambani.Hutungamiri hwake hune simba uye maonero epasirese anotungamira kambani kuwedzera mahorizoni ayo kupfuura miganhu yepamba.
Mukuru wepurojekiti injiniya, ane makore makumi maviri eshongwe dzesimbi ruzivo rwebasa, nyanzvi inozivikanwa kunyanya mumunda wengirozi simbi yekuparadzira shongwe.Chikwata cheinjiniya chine vanhu 6, mumwe nemumwe aine makore mashanu-20 eruzivo rwebasa.Mamwe mainjiniya akanaka pakufambisira shongwe uye mamwe akanaka panhare dzekutaurirana.Vese mainjiniya vanoedza kutsvaga mhinduro yakakwana kune yega yega chirongwa neruzivo rwavo rwakakura.
Maneja wekugadzira, ane makore gumi nematanhatu ehunyanzvi hwekugadzira shongwe, uyo ane basa rekugadzira manejimendi yeshongwe kubva kune zvigadzirwa kusvika kune zvakapedzwa zvigadzirwa.Kune vanhu 115 muboka rekugadzira uye 30,000 matani emidziyo yesimbi ichagadzirwa pagore.
Anopisa dip galvanizing supervisor, akashanda muindastiri yemagetsi kwemakore makumi maviri nemashanu, anonyanya kuita basa rekuvhenekera kwemhando dzesimbi, achitungamira boka revanhu makumi matatu, vane ruzivo rwakapfuma kuvimbisa mhando yeHDG.
Injiniya mukuru wekudhirowa kudhirowa, aine makore gumi nerimwe ehunyanzvi hwekuita basa.Chikwata chese vanhu vashanu, mumwe nemumwe anongopedza mazuva matatu-5 kuti apedze kudhirowa shongwe yerudzi rumwe chete.
Material inspector, kune vanhu vashanu vari muchikwata chekuongorora zvinhu, munhu wese ane chitupa che "qualification certificate yevashandi vekuongorora zvinhu", Vachaona kuti kupasa kwechigadzirwa kwakakura kudarika kana kuenzana ne99.6%, uye fekitori ichipfuura. chiyero chiri 100%.
Sales Rep, Shirley Song ane hushamwari, ane moyo murefu, uye nehunyanzvi kutengesa, anga achishanda muXY Towers kweanopfuura makore gumi uye anoziva shongwe yesimbi zvakanyanya.
Sales Rep, musikana anokoshesa mutengi zvakanyanya uye anozvikudza zvakanyanya nezvake semutengesi, anofarira zvikuru shongwe dzesimbi, anotarisira kupa mhinduro yakanakisa kumutengi wega wega.
Anga achitarisira zvinhu kumba nekune dzimwe nyika kwemakore gumi nemaviri muXY Tower.Ndiani anonyatsoziva kugovera uye kutumira kwemidziyo & zviteshi zvinoenderana nemhando dzedu dzezvigadzirwa.